Ny Union Union dia miantso ny lalan'ny sidina Qantas momba ny fametraham-bahoaka sy ny fandresena be
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Union Union dia miantso ny lalan'ny sidina Qantas momba ny fametraham-bahoaka sy ny fandresena be
Airlines • Airport • Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanapa-kevitra ny fitsarana federalin'i Aostralia manohana ny raharahan'ny Sendikan'ny Mpiasa momba ny Fitaterana manohitra an'i Qantas.
Qantas dia nanilika mpikarakara tany maherin'ny 2,000 nandritra ny areti-mandringana.
Asa any ivelany i Qantas mba hitsitsiana vola ho an'ny orinasa.
Qantas dia nandrakitra vola AU $ 18 miliara (13.2 miliara dolara) amin'ny fidiram-bola amin'ny taona 2019.
Tamin'ny fanapahan-kevitra lehibe iray, niandany tamin'ny Union Union Workers amin'ny tranga izay entin'ny TWU manohitra Qantas Airways Limited.
Nentin'ny sendika tany amin'ny tribonaly ilay goavam-be avy any Aostralianina taorian'ny nahitana raharaham-barotra avy any ivelany fa nahatratra 2,000 ny mpiasa Qantas nesorina teo afovoan'ilay valanaretina COVID-19.
Qantas dia nanilika mpiasan'ny tany maherin'ny 2,000 nandritra ny areti-mandringana, izay ny andraikiny dia niantsorohana ny vola ho an'ny orinasa, izay tamin'ny taona 2019 dia nandrakitra AU $ 18 miliara (13.2 miliara dolara) ho fidiram-bola.
Nilaza ny mpitsara Michael Lee fa tsy resy lahatra amin'ny porofo napetrak'i Qantas izy - ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka natanjaka indrindra tao Aostralia - fa ny famoahana mpiasa an'arivony dia tsy, farafaharatsiny, noho ny maha mpikambana azy ireo.
Ny TWU dia nanakarama an'i Josh Bornstein ho lohan'ny mpisolovava azy hiady hevitra momba ny fihetsiky ny kaompaniam-pitaterana manohitra ny lalàna momba ny asa. Ny raharaha dia nifantoka tamin'ny fanambarana fa ny hetsi-bahoaka nataon'i Qantas - notarihin'ny CEO Alan Joyce - dia natao hamongorana ny fahefan'ny sendika amin'ny fifampiraharahana amin'ny karama.
"Hitan'ny Fitsarana Federaly voalohany fa nisy mpampiasa lehibe nandroaka mpiasa maherin'ny 2,000 satria nikasa ny hanala azy ireo tsy hanana fahaizana hiady varotra miaraka amin'ny orinasa izy ireo amin'ny fifanarahana orinasa vaovao," hoy i Bornstein.
Hanao dia an-dalambe 750 tapitrisa ny sinoa mandritra ny ...
Miasa toy ny andevo mandritra ny 20 taona? Voaroaka ianao!